အားမလျှော့ဘဲအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်ရန် သမ္မတပူတင် အားပေး ၊ ပူတင်၏ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် ကမ္ဘာ့ဖလားသို့? - Yangon Media Group
အားမလျှော့ဘဲအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်ရန် သမ္မတပူတင် အားပေး ၊ ပူတင်၏ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် ကမ္ဘာ့ဖလားသို့?
ရုရှားအသင်းအနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲမစတင်မီ ခြေစမ်းပွဲများတွင် ရလဒ်များကောင်းမွန်ခဲ့ခြင်းမရှိ သော်လည်း အားမလျှော့ဘဲအ ဆုံးစွန်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားရန် အသင်းသားများအား ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က အား ပေးစ ကားဆိုခဲ့သည်။
ရုရှားအသင်းသည် ၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်အ ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရထားသည့် အတွက် အလိုအလျောက်ခြေစစ် ပွဲအောင်ထားပြီးနောက် ခြေစမ်းပွဲ များကစားခဲ့ရာတွင် ရလဒ်များ ကောင်းမွန်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်သဖြင့် ၂ဝ၁ဝ က တောင်အာဖရိကအ သင်းအပြီးတွင် အုပ်စုအဆင့်နှင့် ကျေနပ်ရသော နောက်ထပ်အိမ် ရှင်အသင်းဖြစ်လာရန် ခန့်မှန်းနေ ကြသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း ၃၂သင်း တွင် ဖီဖာကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ် ချက်အရ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေသော ရုရှားမှာ အောက်တိုဘာ ၇ ရက် က မော်စကိုတွင် တောင်ကိုရီးယား ကို ၄-၂ ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ပိုင်း နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အာဂျင်တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ပြင်သစ်၊ သြစတြီးယားအသင်းများကို ရှုံးခဲ့ သလို အီရန်၊ စပိန်၊ တူရကီ အသင်းများနှင့်သရေကျခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် သမ္မတပူတင်က ”ကျွန်တော်တို့အသင်းက လတ်တ လောရလဒ်တွေမကောင်းခဲ့ဘူးဆို ပေမယ့် အသင်းအနေနဲ့ တိုင်းပြည် ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အကောင်း ဆုံးစွမ်းဆောင်ပြီး နောက်ဆုံးအ ချိန်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ရုရှားပြည်သူအားလုံးနဲ့ ဘောလုံး ချစ်သူတိုင်းက မျှော်လင့်ထားကြ ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားအသင်းနည်းပြ ချာချီ ဆော့က အသင်းအတွက် အရေး အပါဆုံးမှာ ကစားသမားများအ ကြား ယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိရေး ပင်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်များ၏အသင်း အပေါ်ယုံကြည်အားပေးမှုကို လည်းလိုအပ်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ဖီဖာ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဘလတ္တာက ရုရှား သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်၏ဖိတ် ကြားချက်အရ မိမိအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲသို့ တက်ရောက် အားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ် ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆွစ်ဇာလန်လူမျိုး ဘလတ္တာ သည် ၂ဝ၁ဝ၊ ဒီဇင်ဘာက ရုရှား ကို ၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားအိမ်ရှင်အ ဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ဖီဖာတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ် ပြီးအဖွဲ့အစည်းအတွင်း အဂတိ လိုက်စားမှုများကြောင့် ရာထူးအား ဆုံးရှုံးခဲ့ရကာ အရေးယူမှုများ လည်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
ယခုအခါ သမ္မတပူတင်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဧည့်သည် တော်တစ်ဦးအဖြစ် မော်စကို တွင်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ပူတင်နှင့် တွေ့ဆုံမည့်နေရာကိုမူ လုံခြုံရေး အခြေအနေ အရမသိရှိရသေး ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
အစိုးရဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် အောက်ခြေစာဝင်၊ စာထွက် အဆင့်အထိ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိရန် လိုအပ်ဟုဆို
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများမှ ပြည်တွင်းသိ
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သိုင်းပညာရှင်များ စုပေါင်းကျင်းပသည့် စုံညီပွဲတော် မုံရွာတွင် ကျင?